काठमाडाैं | पुस ३, २०७८
हिन्दू धर्ममा प्रत्येक धार्मिक अवसरमा अवश्य घण्टी बजाइन्छ । घण्टीको आवाज त प्रत्येक मन्दिरको पहिचान हो र प्राचीन समयदेखि नै मन्दिरमा घण्टी बजाउने परम्परा छ ।
मन्दिरमा घण्टी जडान गर्नु र बजाउनुको धार्मिकका साथसाथै वैज्ञानिक कारण पनि छ ।
देवीदेवताको आरती घन्टनाद विना पूरा हुँदैन । घण्टीको ध्वनिले मन, मस्तिष्क र शरीरलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ । मन्दिरमा आरती हुँदा घण्टीको आवाजले मानिसको मनमा भक्तिभाव जाग्छ ।
मन्दिरमा राखिएका सानाठूला घन्टीका आवाजले वातावरणलाई शुद्ध बनाउँछन् । घण्टीबाट निस्कने ध्वनि चमत्कारी हुन्छ । हावामा भएका सूक्ष्म कीटाणु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छन् । मन्दिरमा लगातार घन्टी बजाउँदा
निस्कने ध्वनिले हानिकारक सूक्ष्म कीटाणुलाई नष्ट गरिदिन्छन् । घण्टीको आवाजले नकारात्मक ऊर्जाको असर बेकामे बनाइदिन्छ असन सकारात्मक वातावरण निर्माण गरिदिन्छ ।
घण्टीको आवाजले एकाग्रता बढाउँछ, मन शान्त हुन्छ, चिन्तन गर्ने क्षमता बढ्छ, धार्मिक विचार जन्मिन्छ र बुद्धि विकास हुन्छ ।
नियमित रूपमा आरती गर्दा र लगातार घण्टी बजाउँदा मन्दिरमा स्थापित देवीदेवताका प्रतिमा चैतन्य हुन्छन् । यी प्रतिमाको पूजा बढी प्रभावशाली र शीघ्र फलप्रदायक हुन्छ ।
पुराणहरूमा बताइएअनुसार, मन्दिरमा घण्टी बजाउँदा अनेकौं जन्मका पाप नष्ट हुन्छन् । सृष्‍टिको प्रारम्भ हुँदा सुनिएको आवाज त्यही घण्टीको ध्वनि हो ।
दार्चुला घटना छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन
घरिघरि भोक लाग्छ ? तौल नबढाउने हो भने खानुस् यी स्न्याक !
तौल घटाउनका लागि मानिसहरू कडा व्यायाम र डाइटिङ गरिरहेका हुन्छन् । तर कतिपयलाई भोक सहन गाह्रो पर्छ अनि उनीहरू जंक फूड खान्छन् । यहाँ हामी केही त्यस्ता खानेकुराको चर्चा गर्दैछौं जसले भोक पनि शान्त पार्छन्...
ललितपुरको सुनाकोठाीस्थित बालकुमारी मन्दिरको लिच्छवि कालिन मूर्ति चोरी भएको छ । शनिवार राति मूर्ति चोरी भएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । मूर्ति चोरी भएलगत्तै ...
यसरी बनाउनुस् मशरूम मेथी मसला
तपाईंलाई च्याउ कत्तिको मन पर्छ ? आज हामी तपाईंलाई मशरूम मेथी मसला बनाउन सिकाउँछौं । सामग्री च्याउ आधा कप मेथी आधा कप पालुंगो (काटेको) आधा कप पिँधेको मकै आधा कप क्रीम दुई ठूला चम्चा जी...
चिकित्सक संघले ‘कल सेन्टर’बाट सर्वसाधारणलाई कोभिडबारे परामर्श दिने
नेपाल चिकित्सक संघले ‘कल सेन्टर’बाट सर्वसाधारणलाई कोभिड–१९ बारे परामर्श दिने भएको छ । संघका महासचिव डा. बद्री रिजालले सोमवार सूचना जारी गर्दै माघ ११ गतेदेखि प्रत्येक बिहान ८ बजेदेखि सा...
काठमाडौं -आँखा शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । यसैबाट त तपाईं संसारका अनेक रंग र वरिपरिका आकर्षक दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले आँखालाई हेरचाह गर्नु जरूरी हुन्छ । ज्यादा काम गर्दा आँखा कमजोर हुन्छ । दिनभर...